I-potato stew kunye ne-cuttlefish recipe | Ukupheka kweKhitshi
Iitapile zityiwe kunye ne-cuttlefish
Namhlanje ndibonisa iresiphi endifuna ukwabelana nawe ngayo ixesha elide, isityu seetapile esimnandi kunye ne-cuttlefish, a iresiphi eqhelekileyo evela eCádiz, nangona izitya ezifanayo zenziwa kwiAndalusia. I-cuttlefish ityebile kakhulu kukufezekiswa okwahlukeneyo kuba kukutya okuneempawu ezahlukeneyo.
I-Cuttlefish yi ukutya okunotye iodine. Le minerali ibalulekile kwimetabolism yethu kuba ilawula inqanaba lamandla ethu kunye nokusebenza ngokuchanekileyo kweeseli. Ukongeza, kwaye kubaluleke kakhulu, yenye yokutya elawula icholesterol, yiyo loo nto ithathwa njengeyona ibalulekileyo ekudleni.
I-1 cuttlefish okanye i-cuttlefish iphelele.
4 iitapile eziphakathi.
2 iitumato ezibomvu.
Okokuqala, kufuneka Coca i-cuttlefish kakuhle. Siza kuyinqunqa ibe ziityhubhu eziphakathi okanye ezinkulu, kuba xa kuphekiwe baphulukana nomthamo. Ukongeza, siza kuyinqunqa yonke imifuno kwiityhubhu ezincinci.
Emva koko siya kwenza i isofrito kwimbiza ebonakalayo. Siza kubeka imvelaphi elungileyo yeoyile yomnquma kwaye siya kuyifaka ngolu hlobo lulandelayo: iodolo, itswele, ipepile kunye netumato. Xa yonke into ifakwe poached, yongeza i-cuttlefish esikiweyo kwaye mayipheke ubushushu obuphakathi okwexeshana.
Okwangoku, masihambe ukuxobula iitapile. Siza kubahlamba kakuhle ukususa nabuphi na ubumdaka obushiyekileyo kwaye siza kubongeza kwimbiza ebonakalayo esikwe kukudana okanye ii-cachelos. Olu hlobo lokusika (olwenza ukuba iitapile ziqhekeze kancinci xa zisikiwe) ziyenza ikhulule isitatshi, isenze umhluzi ube mkhulu.
Ekugqibeleni, sigubungela ngamanzi ashushu kwaye siza kongeza intwana yetyuwa kunye ne thyme. Siza kuvala imbiza kwaye sipheke imizuzu engama-20. Ndikulungele ukungcamla le recipe yeetapile nge-cuttlefish! Ndiyathemba uyayithanda.
Ixesha lokupheka Imizuzu ye20
Iikhilokholi ngokusebenza 312
Cuisine yesiNtu, Izitofu kunye neesobho zokupheka
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi zehlabathi » Cuisine yesiNtu » Iitapile zityiwe kunye ne-cuttlefish
Iicroquettes ezenziwe ekhaya kunye neentonga zolwandle
Iisoseji zenkukhu kwi-baviera sauce